Ispoortii - Oromia Shall be Free
After his dramatic protest at the Rio Olympics, Ethiopian marathoner Feyisa Lilesa didn’t feel safe returning home. But even in his new life in America, …
Ethiopians may suffer from conflicting allegiances Sunday as two Ethiopian elite runners Feyisa Lelisa and Kenenisa Bekele take to the streets of London for the 36thedition …
Taphni kubbaa miilaa kan dhiheenya kanaa Nashaaxa hin qabuu usneeti daawwanna Kan duraan taphatus amma ni batachaa Goolii bakka wallaalee ifumatti galcha. Inni jidduu taphatu …
Feyisa Lelisa runs in exile after his protest in Rio – Houston Chronicle Olympics medalist marathoner Feyisa Lelisa lowers his head after being asked about …
https://venturesafrica.com It ook less than five seconds for Ethiopia’s Olympic medalist, Feyisa Lilesa, to go from national hero to despised traitor. “If I go back …
Fulbaana 22, 2016 Waan muummichi ministeeraa Itoopiyaa H/Maariyaam Dassaaleny mormii Rio irratti ani agarsiisee fi gara Ameerikaa dhufuu dhufuu koo irratti jedhe argeen jira. Baay’ee …
In a dark suit jacket and tieless white shirt, Feyisa Lilesa walked into the ballroom of a Washington hotel and crossed his wrists above his …
Source: Newsweek.com Ethiopian Paralympian Tamiru Demisse showed solidarity with Oromia protesters—who have clashed with the country’s government—as he claimed a silver medal, following a protest …